N'ogbe 140cm Gamer table na T shpe ụkwụ na òké pad Model LY 140cm Onye nrụpụta na Supplier |Ụba abụọ
Tebụl Gamer 140cm nwere ụkwụ T shpe na pad òké Model LY 140cm
Ụdị:Ụdị ịgba ọsọ
Mecha arịa ụlọ:Carbon eriri
Ọgbọ a dị mfe yana siri ike maka ahụmịhe egwuregwu ka mma!
1. Ikanam ọkụ nke egwuregwu oche na-emepụta ihe pụrụ iche egwuregwu ikuku.
2. Desktọpụ sara mbara nke tebụl egwuregwu 55 inch zuru ezu iji tinye 3 Monitors.
3. Desktọpụ MDF dị nro bụ enweghị mmiri na-eguzogide ọgwụ.
4. The T-ekara etiti nke kọmputa Ịgba Cha Cha oche bụ kwụsiri ike na inogide.
5. Enweghị mmanya kwụ ọtọ n'okpuru tebụl iji chebe ụkwụ gị pụọ na mmetụta mberede.
6. All aghụghọ bụ ergonomic na multi-arụ ọrụ.
Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-emepụta ma na-arụpụta desks egwuregwu kacha mma na Amazon.Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-anya isi na nhazi ọhụrụ anyị, nnwale siri ike na usoro nrụpụta ụwa.
55 inch buru ibu Desktop
Debe tebụl egwuregwu a na-arụ ọrụ n'ime ụlọ egwuregwu gị, ụlọ, ọfịs, ebe a na-arụ ọrụ, ọmụmụ ihe, ọnụ ụlọ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ ịgba chaa chaa, jiri oche egwuregwu a hazie ebe ị na-egwu egwuregwu.
• T-ụdị imewe: urable & Mwube siri ike
• Nha oche: 55" (W) x 23.6" (D) x 29.5" (H) / 140*60*75cm
• Ụdị ọkụ ọkụ 8 RGB
• Dị Mfe Ịchịkọta
• Nnukwu mpe mpe akwa oche zuru oke
• Ụkwụ oche na-agbanwe agbanwe
• Carbon eriri laminated tabletop: waterproof, mgbochi ọkọ
• Nko ekweisi dabara adaba & njide iko & sistemu njikwa eriri
RGB FIBER OPTIC ọkụ na-achịkwa
1. Ezubere maka ndị na-egwu egwuregwu: TwoBlow game desk panel na-abịa na fiber optic rgb led lights, na-emepụta ebe egwuregwu na-adọrọ adọrọ.
2. Ultra-High Quality Material: Optical core material kpuchie na elu-ike transperent ire-retardant engineering plastic nke nwere ike hụ na a gaghị enwe àgwà nsogbu dị ka mmebi na nrụrụ ruo ogologo oge.
3. Nhọrọ Ụdị ọkụ ọtụtụ: 8 Single Colors, 8 Single Colors' Change, RGB Light Change & Strobe Lighting.
4. Ogo Nile: Na Carbon Fiber Surface na RGB LED ìhè iji gosi njirimara gamer gị, TwoBlow bụ adịchaghị ma n'ime na n'èzí.
N'ozuzu Ịgba Cha Cha Style
Ụlọ egwuregwu TwoBlow na-ejikọta mebere n'ezie, gbanwee echiche efu n'ime ndụ, ka onye ọ bụla na-egwu egwuregwu tinye aka na ụwa egwuregwu, ka onye ọ bụla na-egwu egwu hụ ụwa nke egwuregwu ahụ ọbụna n'ụlọ.
Jiri oche egwuregwu ESGAMING mepụta oghere ọfịs zuru oke.N'elu tebụl na-echekwa oghere na-enye ọtụtụ ohere maka nleba anya ma ọ bụ laptọọpụ gị, yana akwụkwọ na ngwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa.Nhazi mara mma na-eme ka oche a bụrụ mgbakwunye zuru oke na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Ahụmahụ ọrụ ka mma
Ebe ọrụ na-agbanwe agbanwe na-enye gị ohere inwe ahụmịhe ọrụ ka mma.Ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke mgbu azụ, ọrịa shuga, nsogbu obi, oke ibu na nsogbu anụ ahụ ndị ọzọ mgbe ị na-agbanwe n'etiti ịnọdụ ala na iguzo ọtọ.
Igwe njikwa USB Grommets
Na oghere njikwa eriri 2 n'aka ekpe na aka nri, dabara adaba maka ntinye eriri
Onye jide iko
Onye egwuregwu-Enyi na enyi
Amụrụ maka ịgba chaa chaa, tebụl egwuregwu a na-enye gị ohere ịgba chaa chaa na gburugburu ebe ọrụ.
• 1 x RGB Desktọpụ Ịgba Cha Cha
• 1x Mpempe òké kpuchiri nke ọma
• 1x iko iko
• 2x nko ekweisi
• 1x Nchekwa ihe
• 1 x ọdụ ụgbọ mmiri USB
• Ngwa nwụnye 1x
• 1x Wụnye akwụkwọ ntuziaka
Akụkụ ngwaahịa 55 x 23.6 x 29.5 sentimita asatọ/ 140*60*75cm
Ibu Ibu 49 pound
Onye nrụpụta Oku abụọ
Nọmba nlereanya ihe LY140
Nke gara aga: RGB Gamer Desk nwere ihe njikwa anya ZA
Osote: Ụdị oche egwuregwu akụ na ụba R GT-01